Luukos 6:46,Luukos 13:25-Luukos 13:27 SOM - Labada Aasaas - Maxaad iigu yeedhaan, - Bible Gateway
Luukos 6:46 Somali Bible (SOM)
Luukos 6:46 : Mat. 7:24-27
Luukos 12Luukos 14
Luukos 13:25-27 Somali Bible (SOM)
25 Goortii ninkii guriga lahaa kaco oo albaabka xidho, oo aad bilowdaan inaad dibadda istaagtaan oo aad albaabka garaacdaan, idinkoo leh, Sayidow, naga fur; isaguna waa u jawaabi doonaa oo idinku odhan doonaa, Garan maayo meeshaad ka timaadeen. 26 Markaasaad bilaabi doontaan inaad tidhaahdaan, Hortaada ayaannu wax ku cuni jirnay oo ku cabbi jirnay, oo jidadkayaga ayaad wax ku bari jirtay. 27 Markaasuu odhan doonaa, Waxaan idinku leeyahay, Garan maayo meeshaad ka timaadeen; iga taga kulligiin oo xaqdarrada ka shaqeeya.